कुनै समय कंगाल बनेका बलिउडका यी ६ चर्चित स्टार, कसैको घर लिलाम त कसैको गयो ज्यान | Lifemandu
शुक्रबार, १ असोज, २०७८, | Friday, Sep 17, 2021
कुनै समय कंगाल बनेका बलिउडका यी ६ चर्चित स्टार, कसैको घर लिलाम त कसैको गयो ज्यान
| शनिबार, ३१ भदौ, २०७४
एजेन्सी । बलिउड चलचित्र उद्योग विश्वमा नै धनि मध्येको एक मानिन्छ र यहाँका स्टारहरुको अवस्थामा पनि निकै राम्रो छ । उनीहरुको लाइफस्टाइलका कारण सधैँ मानिसको नजरमा परिनै रहेका हुन्छन् ।
यिनीहरुलाई देख्दा लाग्छ कि यिनीहरुलाई कहिल्यै दुख नै पर्दैन । तर हर कोहि मानिसको जीवनमा कहिले सुख अनि कहिले दुख आइनैरहन्छ । र विश्वमै चर्चित यस्ता केहि बलिउडका कलाकार छन् जो जीवनमा एकपटक कंगाल हुनुपरेको थियो ।
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन अभिनयका हिसावले आजपनि विश्वभर निकै चर्चित छन् । र उनको लाइफस्टाइलपनि कुनै देशको राजाको भन्दा कम छैन । तर कुनै एक समय यस्तो थियो जुन बेला उनी कंगाल बनेका थिए । जुन समय उनको घर समेत लिलाम गरिएको थियो । ९० को दशकमा उनले आफ्नो सारा लगानी लगाएर एवीसियल कम्पनी खोलेका थिए जुन असफल भयो र उनको सवै लगानी डुब्यो । र उनीलाई ९० करोड ऋण लागेको थियो ।
जैकी कुनै समय आफ्नो करियरको उच्च स्थानमा पुगेका अभिनेता हुन् । तर उनले एक समया साजिद नाडियाडवालासँग ऋण लिएका थिए जुन उनले तिर्न सकेनन् र आफ्नो फ्ल्याट बेचेर ऋण तिर्न बाध्य भए ।
हंगल निकै राम्रो अभिनेतामा गनिन्छन् भने उनको व्यक्तित्प पनि निकै राम्रो थियो । उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनहरुमा पैसामो अभावमा बाचिँरहेका थिए । उनको साथमा आफ्नो रोगको उपचार गर्ने पैसा समेत थिएन ।
फिल्म ‘बैजू बावरा’ मा शानदार अभिनय गरेर सवैको दिलमा बस्न सफल भारत भूषण आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनहरुमा पैसाको अभावमा बाचिँरहेका थिए । उनले अन्तिममा आफ्नो घर, गाडी र सवै सामान बेच्न बाध्य भएका थिए ।
आफ्नो प्रोडक्सनको चलचित्र ‘इश्क़ इन पेरिस’ फ्लप भएपछि प्रीति जिंटा कंगाल भएकी थिइन् ।
सीताराम पंचाल स्लमडॉग मिलेनियर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जॉली एलएलबी, सारे जहां से महंगा, हल्ला बोल, बैंडिट क्वीन जस्ता चलचित्रमा सानदार अभिनय गरेका फोक्सोको क्यान्सरका विरामी थिए । उनीसँग आफ्नो उपचा गराउने पैसा समेत थिएन । फेसबुक मार्फत सहयोग मागियो तर पैसाको अभावमा उपचार नपाएर उनको मृत्यु भयो ।
फेसबुक एकाउनट छैन! यहाँ क्लिक् गर्नुहोस
आफ्ना मनपर्ने ‘स्टार’का यस्ता तस्बिर कहिल्यै देख्नुभएको छ ?
एजेन्सी । कुनै एक समय थियो बलिउड स्टार चर्चित बन्नको लागि जुन कुनै हदसम्म जान पनि तयार हुन्थे । भने आजभोलि बोल्ड फोटोशूटको नाममा टपलेस हुने चलन पनि निकै बढिरहेको छ ।
यस्तो भयो बलिउडका चर्चित अभिनेता कादर खानको हालत
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता कादर खानको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको छ । कमेडी गरेर धेरैलाई हसाएका कादर खान अहिले आफैँले हास्न भूलेका छन् ।
बलिउडका दुर्लभ तस्बिर : केहि चर्चित स्टार सासुसँग
एजेन्सी । बलिउडमा मात्र हाइन आम जीवनमा पनि सासु–बुहारी झगडा एक हिस्सा जस्तै बनेको छ । तर बलिउडका केहि यस्ता हस्तिहरु छन् जसलाई धेरै पटक सासुसँग भेटिएका छन् ।
नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि
भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपूर्ति मन्त्री भट्टको सचिवालयद्वारा खण्डन
तिम्ल्याहा डाक्टरका बाबु शिवप्रसादको ‘हे नाथ दिगम्बर’ सार्वजनिक
सभामुखको उम्मेदवारमा अग्नि सापकोटा
आवुधाबीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये तीन जना नेपाली
प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबीच छलफल
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीले वर्षा र हिमपात(मौसम पूर्वानुमानसहित)
मिस तामाङ पोखरा हुने, तयारी पूरा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार
‘माइकल अधिकारी’ को छायांकन शुरु
Copyright © 2021 Lifemandu.com — All rights reserved